Maxaa ka jira in Guddoomiye Jawaari lagu qasbay Shirkii jaraa'id ee maanta..? [Akhriso Warbixinta C/raxmaan C/shakuur] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaa ka jira in Guddoomiye Jawaari lagu qasbay Shirkii jaraa’id ee maanta..? [Akhriso Warbixinta C/raxmaan C/shakuur]
Dad badan ayaa is-weydiinaya sababta keentay ee loogu baahday inuu Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ee xilka iska casilay maanta saxaafadda kula hadlo xarunta Madaxtooyada.
Su’aasha ayaa ka dhalatay iyadoo balanqaad hor uu ka baxay Guddoomiye Jawaari, isla markaana ay jirtay cabsi ku saabsan inuu khubadda Berri u dhacdo si ka duwan is-casilaad, waxayna arrintan ka dhex muuqatay shirkii Jaraa’id oo Jawaari aanu ku soo hadal qaadin Madaxweynaha garabkiisa taagnaa.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ayaa warbixin yaab leh ka qoray shirka jaraa’id ee Guddoomiye Jawaari ku qabtay Villa Somalia xilli lagu balansanaa kulanka Berri ee Baarlamaanka.
HOOS KA AKHRISO WARBIXINTA C/RAXMAAN C/SHAKUUR
Saaxibkeey ayaa i waydiiyey muxuu Jawaari shirka jaraa’id ugu hordhacay kulanka uu Baarlamaanka beri ugu balansanaa. Waxaan ku iri waxaan ka mid ahaa 6 ruux oo labo Ajnabi tahay (Museveni iyo Mahiga) oo qayb ka ahaa wadahadalkii ka dhacay Madaxtooyada Uganda ee lagu go’aamiyey in Farmaajo xilka Raysalwasaare looga qaado 2011kii.
Shir habeeno socday ka dib ayuu Madaxweyne Shariif go’aansaday in Farmaajo iscasilo. Farmaajo wuxuu soo yimid Kampala. Wadahadal saacado qaatay ka dib oo isaga Sheikh Shariif dhexmaray ayuu ku aqbalay in uu iscasilo. Xiligaas waxaa taagnaa loolan Xukuumada iyo Baarlamaanka u dhexeeyey. Farmaajo markii uu Muqdisho ku soo laabtay ayuu damcay in uu ka laabto balantii uu Kampala ku soo qaaday, laakiin ugu danbayntii cadaadis dhinacyo kala duwan kaga yimid ayuu ku aqbalay. Habeenkii heshiiska la saxiixayey ayaa la isku soo qaaday in Farmaajo dhinaciisa ka saxiixo heshiiska, laakiin wuxuu ku adkaystay in aan loo baahnay, isaguna nin qowl leh yahay.
Saxiibkeey waxaan ku iri waxaa laga yaabaa in Madaxweyne Farmaajo uu ka shakiyey Jawaari in uu war kale beri la soo shirtago, sababtoo ah Jawaari intii uu hadlayey marna ma xusin kaalinta Madaxweynaha, uma mahad celin, magaciisana sooma qaadin. Odaygu uma ekayn nin ku qanacsan in uu maanta hadlo.
Previous articleDowladda Imaaraadka oo War culus kasoo saartay Lacagtii lagu qabtay Muqdisho [Xiriirka labada dal oo meel xun gaaray-Akhriso]
Next articleDucfad Ciidamo ka tirsan Xoogga Dalka oo tababar loogu soo xiray Saldhigga Turkiga ee Muqdisho [Sawirro]